नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्य भन्छिन् – ओलीलाई ‘ट्रयाक’मा ल्याउन पनि बैठकमा जानुपर्छ
असार १६, काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनिएको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई भंग गर्दै केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएका छन् । बिहीबार बोलाइएको बैठकमा नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको समूह सहभागी हुन्छ वा हुँदैन ? भन्ने कुरा अहिले निकै चाँसोको विषय बनेको छ । ओलीको बोलाएको बैठकमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने विषयमा माधव समूह आन्तरिक छलफलमा पनि जुटिरहेको छ ।
ओलीले चालेको पछिल्लो कदम र माधव पक्षको बुझाइका विषयमा संसार न्यूजले माधव पक्षीय नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यसँग केहि जिज्ञासा राखेको छ । नेतृ शाक्यसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईँहरुका मागअनुसार ओलीले आयोजक कमिटी भंग गर्दै केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाक्नुभएको छ । अब त बैठकमा जानुहुन्छ होला नि ?
केन्द्रीय कमिटी बैठकमा जाने/नजाने विषयमा हामी सल्लाह गरेर गर्छौं । हामी छिट्टै बैठक बस्दैछौं । तर, पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले यो कदम चालिरहँदा साँच्चिकै मनबाटै एकता चाहेको भने देखिएको छैन् । उहाँले एकपछि अर्को उल्टो काम गर्नुभएको छ ।
एक त आयोजक कमिटीबाट यस्तो निर्णय गरिनु हुँदैनथ्यो । अदालतले नै यो कमिटीलाई अवैध भनिसकेको छ । अवैध कमिटीलाई सुरुमै भंग गरिनुपर्दथ्यो । उहाँले त सर्वोच्चको आदेशलाई पनि नमानेर बैठक डाकेर निर्णय गर्नुभएको छ ।
अर्कोतर्फ, निर्णयहरु एकलौटी र मनखुसी ढंगले गर्नुभएको छ । क–कसलाई स्थायी समितिमा लैजाने भन्ने निर्णय मनमौजी हिसाबले गर्नुभएको छ । यो पुरै उल्टो भएको छ । यो निर्णयहरु उहाँले एकलौटी गर्नु हुँदैनथ्यो ।
तपाईँहरुका मागअनुसार नै निर्णय गरिएको भनिएको छ । तपाईँ भन्नुहुन्छ उल्टो भयो । कसरी गर्नुपथ्र्यो ?
हाम्रो प्रष्ट कुरा छ, पार्टी संरचनालाई अदालतको आदेशअनुसार ०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काऔं । सोही संरचनाअनुसारको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाकौं । स्थायी कमिटीको बैठकबाट के गर्ने ? प्रस्ताव तयार गरौं । त्योभन्दा अगाडि कमरेड ओली र माधव नेपालबीच छलफल गरौं । सोही छलफलअनुसार स्थायी समितिले राजनीतिक प्रस्ताव तयार गर्ने र सोही प्रस्तावअनुसार केन्द्रीय कमिटीको बैठक राख्ने काम गरौं । अनि त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा टुंग्याउनु पर्ने कुराहरु टुंग्याएर जाऔं ।
यहाँ माओवादीबाट आउनुभएका रामबहादुर थापा बादलसहितको टिमलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा छ । त्यसलाई केन्द्रीय समितिबाटै टुंगो लगाऔं । जसरी अहिले केहिलाई स्थायी समितिमा मनोनित गरिएको छ, उनीहरुलाई त्यहिँबाट गरौं ।
अहिले पार्टी संरचना भताभुङ्ग अवस्थामा छ । त्यसलाई पनि त्यहिँबाट समाधान गरौं । यी सम्पूर्णं कुराहरुको प्याकेजसहित छलफल गरेर केन्द्रीय कमिटीबाट समाधान खोजौं भन्ने हाम्रो माग हो । त्यो हुनुपथ्र्यो । सुल्टो काम भनेको पनि यहि हो ।
तर, उहाँले हामीलाई पुरै अलग राखेर आफ्नो खुसीले निर्णय गर्नुभयो ।
लामो समयको बहस, छलफल र रस्साकस्सी पछि हामी यो ठाउँमा आएका छौं । योबीचमा सँगै नभएपनि हामीबीच निकै गहिरो गरि वैचारिक बहस भएका छन् । ओली कमरेडले जे–जे गर्नुभयो त्यो विषयमा निकै गम्भीर रुपमा वैचारिक बहस चलेका छन् । त्यो वैचारिक बहस चलिरहँदा सच्चिने अवस्था भने बनेको देखिन्छ । तर, उहाँ पूर्णं रुपबाट सच्चिएको भने देखिएको छैन् । साँच्चिकै कम्युनिष्ट आन्दोलनको नेता बन्ने हो भने उहाँ पूर्णं रुपबाट सच्चिनुपर्छ । एकताको भावनालाई निकै फराकिलो बनाउनुपर्छ । अत्यन्तै लोकतान्त्रिक संस्कृति र संस्कार विकास गर्न जरुरी छ ।
भनेपछि सबै निर्णयहरुप्रति तपाईँहरु असहमत ?
के–के निर्णय भए भन्ने तिर भन्दा पनि प्रक्रिया गलत भयो भन्ने हो । जुन विधि प्रक्रिया अपनाउनु भयो यो बेठिक भयो । हामीले प्रष्ट रुपमै जेठ २ गते भनिरहेका छौं । हामीले ०७३ जेठ ३ होइन् जेठ २ मै फर्किनुपर्छ भनेका छौं । हामीले नेकपा खोजेको होइनौं, हामीले नेकपा (एमाले) खोजेका हौं । जुन नवौं महाधिवेशनबाट बनेको स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी छ त्यो खोजेको हो ।
सबै निर्णय त्यहिँबाट गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा हो । कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई पनि एकिकृत गर्नको लागि को–को कहाँबाट आउनुभएको छ, उहाँलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, सबै कुरा तिनै कमिटीले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
तपाईँहरुले जेठ २ को कुरा गरिरहँदा उहाँहरुले प्रष्ट रुपमै जेठ २ होइन ३ मा जान सकिन्छ भन्नुभएको छ । आयोजक कमिटी भंगको निर्णय पनि सोही कार्यनीतिमा आधारित देखिन्छ । यो अवस्थामा तपाईँहरु अब सहभागी हुने अवस्था रहन्छ कि रहन्न ? सामूहिक निर्णयभन्दा व्यक्तिगत हिसाबले कसरी हेर्नुभएको छ ?
अगाडि त नबढि सुकै छैन् । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन नेकपा (एमाले)ले मात्रै हाँक्न सक्छ, एमालेले मात्रै व्यवस्थित गर्न सक्छ । आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन पनि एमालेको भूमिका महत्वपूर्णं रहन्छ । यसमा म प्रष्ट छु ।
मेरो व्यक्तिगत विचारमा, यसो भनिरहँदा हामीले कम्युनिष्ट पार्टी कसरी चलाउने ? भन्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ । त्यसको विधि र प्रक्रिया मिचेर आन्दोलनलाई म अगाडि बढाउँछु भन्ने कल्पना कसैले गर्छ भने त्यो मिथ्या बाहेक केहि होइन् । त्यो उल्टो हुन्छ । कम्युनिष्ट पार्टी पूर्णं विधि र प्रक्रियाअनुसार चल्छ ।
अबको सन्दर्भमा हामी आलोचना पनि गर्छौं विधि नपुर्याएको, मन साँघुरो बनाएको ठाउँमा । छलफल गरेर गरेको भए के बिग्रिन्थ्यो, स्थायी कमिटीको बैठक राखेर निर्णय गरेको भए के बिग्रिन्थ्यो, माधव जीसँग छलफल गरेको भए के बिग्रिंन्थ्यो ? अझै फराकिलो हुन्थ्यो । तर, उहाँको मन साँघुरो छ । एकताको पक्षमा देखिन्न । प्रफुल्ल मनले एकता चाहेको देखिन्न ।
यो प्रक्रिया त उहाँहरुले अबलम्बन गरिसक्नुभएको छ । १८ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनु भएको छ । तपाइँहरुको समूहगत निर्णय गर्ने विषय एउटा रहला । तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ, बैठकमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ ?
मलाई लागेको, यी तमाम् निर्णयप्रति पर्याप्त आलोचना गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रक्रियामा गलत भएपनि केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी हुनपर्छ । हामी नेकपा (एमाले)लाई एकताबद्ध गराउन चाहन्छौं । ओली जी पनि यत्तिकै यहाँसम्म आउनुभएको छैन् । उहाँ पनि धेरै कुरा सच्याउँदै, आत्माआलोचित हुँदै आउनुभएको छ । अझै पनि उहाँको मन प्रफुल्ल छैन् । अझै पनि विधिलाई पूर्णँ स्वीकार गर्नुभएको देखिन्न । तर, यी तमाम् विषयलाई आलोचना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । उहाँलाई ट्रयाकमा हिँडाउन पनि बैठकमा जानुपर्छ ।
तपाईँहरुको समूहमा ओली नेतृत्वको एमालेमा फर्किने वा नफर्किने भन्नेमा भिन्न–भिन्न मत देखिन्छ । कतिपयले अध्यक्ष ओलीको पछिल्लो कदमलाई माधव समूह फुटाउने अस्त्र भनि पनि टिप्पणी गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा सबै सहभागी हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
हाम्रो समूह त्यस्तो विभाजित हुँदैन । हाम्रो समूहमा एउटा यता जाने, अर्को उता जान्ने भन्ने हुँदैन् । हामी निकै खुलेर छलफल गर्छौँ । कम्तिमा पनि यतिसम्म भयो भने जाने भन्ने यसअघिकै कुरा हो । तर, यतिसम्म आइसके पछि के गर्ने त ? भन्ने कुरामा हामी सामूहिक रुपमै निर्णय लिन्छौं । यतिसम्म फड्को मारेको अवस्थालाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने पनि देखिन्छ ।
तत्कालै हस्ताक्षर त्यतिकै फिर्ता लिने कुरा आउँदैन् । त्यो अन्य दलसँगको सम्बन्धको कुरा पनि हो । अर्को पार्टी एउटै रहँदा त्यो पार्टीभित्र पनि छलफल हुने कुरा हुन्छ । एकिकृत भएर अगाडि बढ्दा ति विषयमा कसरी जाने छलफल भई नै हाल्छ । त्यसलाई साह्रै महत्वको विषय बनाउन मिल्दैन् । त्यहिलाई शर्तको रुपमा पनि अगाडि सार्न मिल्दैन् । यहाँसम्म आएको हाम्रो कारणले होइन्, ओली जी कारणले हो । उहाँको गलत कदमको कारणले नै हामी यहाँसम्म आएका हौं ।
अध्यक्ष ओलीले तपाईँहरुको मागप्रति केहि शर्त पनि राख्नुभएको थियो । न्यूनतम आत्माआलोचित हुने र अदालतमा कांग्रेस सभापति देउवाको पक्षमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने भन्ने उहाँको शर्त थियो । एमालेमा फर्किँदै गर्दा त्यो विषय पुरा गर्नुहुन्छ वा हुन्न ?
निष्कर्षको रुपमा, उहाँको पछिल्लो कदमलाई के सकारात्मक भनेर भन्नुहुन्छ ?
साउन १३, काठमाडाैं । नेकपा (एमाले)का पूर्वमाओवादी समूहका चार नेताले…
मुग्लिन–नारायणघाट सडक खण्डको समस्या कसरी समाधान गर्ने ? वरिष्ठ इन्जिनियर रिमालको सुझाब यस्तो
साउन ८, काठमाडाैं । वर्षा लाग्यो की चिन्ता बढ्यो ।…
सांसद पार्वती विशुन्के भन्छिन् – कारबाही हामीलाई होइन् पार्टी र संसद सिध्याउन खोज्ने ओलीलाई हुनुपर्छ
पार्टीलाई एक ढिक्का र संगठन सुदृढीकरणको लागि सभापतिमा उठ्छु-ऐनबहादुर शाही
गरिमाका सिइओ भन्छन् – सबै व्यवसायीलाई बचाउनु पर्छ, हामी नाफा खोज्दैनौं
‘यहि अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा प्रवेश गर्न सक्दैनौं’